Indawo yokutyela epholileyo yeChic Studio@Hauz Khas Village
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNalin
Umgangatho ophantsi ozimeleyo we-450 sq yeenyawo studio yefulethi kwindawo enemfashini kunye nekhuselekileyo yaseNew Delhi.
I-Decor ikwisitayile sase-Indian Rajasthani kwaye ifulethi ilungile ngaphandle kweyona ndawo indala yesikhumbuzo senkulungwane ye-12 kunye neChibi.
** Uncedo ngokudluliselwa kweSikhululo seenqwelomoya kunye nothutho lwasekhaya
** Nanini na ukungena. Kwaye bhetyebhetye khangela ngaphandle ngokuxhomekeke kubukho.
** Iingcebiso zasekuhlaleni kunye neengcebiso ezigcinwe kumdla wakho.
** Isantya esiphezulu esizinikele kwi-intanethi.
** Impahla yokugcina inketho.
Igumbi elinye lokulala elihle elenziwe kwisitayile esidala seRajasthani kunye nembono yechibi kunye nesikhumbuzo senkulungwane ye-13 entliziyweni yeDelhi kunye nelali yaseHauz Khas. Le yindlu yenkonzo ezimeleyo inegumbi elinye lokulala elinendawo yokuhlala enombono wesikhumbuzo seHauz Khas.
Le ndawo isembindini weDelhi, nje imizuzu engama-30 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. Zonke iindawo eziphambili ezinomtsalane kubakhenkethi zingaphakathi kwe-30min drive.
I-Hauz Khas Village idweliswe njengeendawo ezilishumi eziphezulu zokujonga eDelhi ngumcebisi wohambo.
Le ndawo liziko lobugcisa, iigalari, iiboutiques zefashoni kunye neendawo zokutyela / ii-pubs ezinkulu eDelhi.
Ixesha lokungena libhetyebhetye kodwa kufuneka kuxoxwe ngalo ngenxa yokuphuma kweendwendwe zangaphambili
I-WIFI KUNYE NE-INTERNET
I-Wifi ye-Hi Speed yasimahla.
- Ibhedi ecocekileyo kwaye ekhululekile.
-Ibhedi emhlophe itshintshile yonke imihla.
- Iitawuli ezimhlophe ezitsha zitshintshwa yonke imihla.
- Izinto zangasese
- Udluliselo lwesikhululo seenqwelomoya lubonelelwe kwaye lucetyiswe njengoko lulula kakhulu kwaye luya kuhlawuliswa ngokufanayo neteksi yerediyo, kukwenza lula undwendwe kwinguqu egudileyo ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kwigumbi.
Ukuthatha yi-15 USD, Ukulahla yi-10 USD.
-ITV enoQhagamshelwano lweCable -250 amajelo.
-Indlu iza nekhitshi eligcweleyo
- Iketile yoMbane
- Zonke izitya onokuthi uzisebenzise ekuphekeni
- Zonke izitya / iglasi / ikomityi njl.
Kuya kufuneka uhambe kwasekuqaleni ...
Indlu icocwa kube kanye ngemini kwaye impahla isendlini
Le ndawo yohlukile ngengqiqo ngenxa yokuzola, uxolo olunikezelayo nangona ikumbindi wesixeko esine-buzz ngeenxa zonke.
Ndinamanye amagumbi ambalwa adweliswe ku-Airbnb akwisakhiwo esinye kodwa akwimigangatho eyahlukeneyo. Yahluke kancinane kunye nomahluko omncinci kwimbono enikezela ngayo kwi-balcony. Kwimeko yekhalenda ayibonisi ukufumaneka kwale ndlu, ndingacela ukujonga amanye amagumbi am amabini nawo.
4.84 ·Izimvo eziyi-77
4.84 · Izimvo eziyi-77
Le ndawo isembindini weDelhi, nje imizuzu engama-30 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. Zonke iindawo eziphambili ezinomtsalane kubakhenkethi zingaphakathi kwe-30min drive. I-Hauz Khas Village idweliswe njengeendawo ezilishumi eziphezulu zokujonga eDelhi ngumcebisi wohambo. Le ndawo iziko lobugcisa, iigalari, iiboutique zefashoni kunye neendawo zokutyela / ii-pubs ezinkulu eDelhi
Umbuki zindwendwe ngu- Nalin
Ndihlala nje kwizakhiwo ezimbini kwaye ndiyazama ukubakho ngokobuqu ngelixesha uzakufika ngalo kodwa xa ufuna uncedo lwam ndihlala ndikhona. Ndiya konwaba ukucudisa uhambo lwakho ngokusekelwe kwizinto ozithandayo kunye nezinto ozithandayo.